Ghostwriter Jura I Ha u oggolow shaqadaada inay tuuraan waraaqaha waraaqaha ah
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrad sharciyeed oo lagama maarmaan ah
Daraasadaha sharciga ayaa aad caan u ah. Si kastaba ha noqotee, sinnaba looma dhayalsan karo.
Xilliga caadiga ah ee waxbarashadu waa 9 semestar. Saddexda semestar ee koobaad ee koorsooyinkani waa koorsada aasaasiga ah. Tan waxaa ku xigta 3-semester koorso muhiim ah. Heerka caadiga ah ee shahaadada sharciga waa imtixaanka gobolka. Imtixaanka gobolka dhammaan albaabadu waxay u furan yihiin inay ka shaqeeyaan maxkamad ama hadhow inay u shaqeeyaan qareennimo. Si kastaba ha noqotee, jaamacadaha qaar ayaa sidoo kale bixiya Bachelor (Bachelor of Law = LL. B.) iyo Master (Master of Law = LL. M.) shahaadooyin. Xirfad maxkamadeed - dacwad ooge guud ama garsoore - ama qareen ahaan suurta gal kuma ahan shahaadooyinkan.
Koorsada aasaasiga ah waxaad ku baran doontaa aasaaska sharciga. Kuwaas waxaa ka mid ah
Falsafada sharciga iyo
Intaas waxaa sii dheer, muxaadarooyin iyo aqoon isweydaarsiyo ku saabsan qaabab sharciyeed gaar ah horeyba waa looga soo qeyb geli karaa koorsada aasaasiga ah, iyo sii kordheysa koorsada ugu weyn:
Sharciga ganacsiga iwm.
Sharciga caalamiga iyo sharciga Yurub waa takhasusyo dheeri ah.
Abitur waa shuruud looga baahan yahay barashada sharciga. Fikirka gorfeynta iyo caqliga ku dhisan waa inuu jiraa sidoo kale dareen luqadeed oo xoog leh. Dabcan, sidoo kale way fiicantahay haddii aad aqoon u leedahay Latin. Si kastaba ha noqotee, Latinumku shuruud uma aha barashada.
Inta lagu guda jiro barashadaada sharciga waa inaad sameysaa waraaqo badan oo tacliimeed iyo waraaqo xilliyeed. Imtixaanka gobolka iyo sidoo kale shahaadada Bachelor-ka iyo Masterka, waa inaad qortaa warqad saynis ah. Shaqadani badanaa waqti badan bay qaadataa. Marar dhif ah ayaad waqti u heysaa tan maxaa yeelay sidoo kale waa inaad u diyaar garowdaa imtixaannada adag. Shuruudahaan baahida badan darteed iyo howlaha waqtiga qaata ee aad la kulanto inta aad ku guda jirto waxbarashadaada, waxaad inta badan heleysaa in taageerada adoo ka shaqeynaya qaybta sharciga oo ay la socdaan xirfadleyda sifiican u tababaran ay kuu noqon laheyd gargaar aad u weyn.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan ka dhisnay barkad ballaadhan qorayaal waaxda sharciga. Marka waad hubsan kartaa inaan uheli doonno qof xiriir wanaagsan leh oo codsi kasta oo macaamil ah oo gaar ah, kaasoo ku garab istaagi doona inuu kaa caawiyo shaqada oo dhan inta aad wax baraneyso.
Waxay kuxirantahay mowduuca takhasuska leh ee ay tahay inaad wax ka qabato, waxaad ka faa'iideysan kartaa taageeradaada shaqsiyadeed ee aad ka hesho qoraayaasheena. Qorayaasheennu waxay kaa caawin doonaan abuurista sideed qoraal oo nooc walba leh waxayna horeyba sumcad fiican ugu kasbadeen ardaydeenii hore. Qaar badan oo macaamiisheenna ka mid ah, oo aan sannado badan ilaalinay, waxay si cad ugu sheegeen baaritaankooda inay rabaan isla qoraagii sidii amarkii ugu horreeyay. Anaga ahaan, kani waa jawaab celinta ugufiican ee macquul ah ee macaamiisha qanacsan ee aan ku heli karno adeeg ghostwriting ah. Naftaada ka dhaadhici oo abuuro codsigaaga shaqsiyeed ee gurigaaga, bachelorka, shahaadada mastarka ama imtixaanka gobolka waxaanan kaa dhigi doonaa dalab aan qasab ahayn oo ku habboon baahiyahaaga!
Kaliya nala soo xiriir email ama taleefan ama dib noogu soo wac annaga oo lacag la'aan ah. Waxaan dib kuugu soo wici doonaa bilaash.
Sharciga mustaqbalka shaqooyinka
Markaad dhamaysato shahaadadaada sharciga, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ka bilowdo xirfaddaada Jarmalka oo keliya laakiin sidoo kale gudaha Midowga Yurub iyada oo aan baaritaan dheeraad ah lagaa qaadin. Waxaad noqon kartaa qareen z. B. inuu dego Isbaanish, haddii aad aqoon u leedahay sharciga Isbaanishka oo aad ku hadasho luuqadda Isbaanishka. Xaaladda waxyar bay ka duwan tahay haddaad rabto inaad ka bilowdo tababar sharci gudaha Mareykanka. Gudaha Mareykanka waxaad u baahan tahay imtixaanka BAR, oo gobollo badan oo Mareykan ah kaa doonaya inaad ka barto sharciga jaamacad Mareykan ah.
Imtixaanka gobolka waxaa ku xigta tababar laba sano oo sharci ah, kaas oo lagu soo gabagabeeyo imtixaanka labaad ee sharciga ee sharciga. Hada unbaa runti bilaabi kartaa shaqadaada.
Hubinta tayada ee sharciga